२०७७ कार्तिक १ शनिबार १९:२५:००
चितवन । चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा पहिलो पटक कृत्रिम गर्भाधान विधिबाट बच्चा जन्मिएको छ ।
विगत १५ वर्षदेखि सन्तान हुन नसकेको भरतपुरका दम्पतीको कृत्रिम गर्भाधान विधिबाट शनिबार छोराको जन्म भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ । प्रसुती विभागका डाक्टर रेनुका ताम्राकारको टीमले शल्यक्रिया गरी बच्चाको जन्म दिएको हो ।
अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले शनिबार गत वर्ष माघमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको र शल्यक्रियामार्फत शिशु जन्मिएको जानकारी दिए । अस्पतालले चितवनमै पहिलोपटक कृत्रिम गर्भाधानबाट शिशु जन्माइएको दाबी गरेको छ । शल्यक्रियाबाट जन्माइएको शिशु र आमाको स्वास्थ्य सामान्य रहेको डा. लम्सालले बताए ।
कृत्रिम गर्भाधान सेवा लिएका पहिलो दम्पत्तीबाट बच्चा जन्माउन सफल भएको अस्पतालको दाबी छ । दुई वर्षअघि यो सेवा सुरु गरेको अस्पतालले अन्य केही दम्पत्तीको समेत कृत्रिम गर्भाधान सेवा दिएको जानकारी दिएको छ ।